Nin khaat lagu qabtay oo 8 bilood lagu xukumay [Video] | Somaliska
Nin lagu qabtay in ka badan 100kg oo Khaat ah ayaa maxkamad ku taala gobolka Värmland waxay ku xukuntay 8 bilood oo xabsi ah. Ninkaan ayaa bishiii labaad waxaa la qabtay isaga oo khaatka u waday dalka Norway. Ninkaan ayaa markii maxkamada la soo taagay waxa uu ku dooday in uusan ogeyn in baabuurka uu saaranyahay khaatka.
Khaatka ayaa sharci daro ka ah Sweden. Holland oo ahayd goobta uu ka soo galo khaatka ayaa xitaa mamnuucday. Wariyaasha u dhashay Holland ayaa hada dabagal ku haya Soomaalida khaatka cunta iyadoo maalmihii la soo dhaafay uu aad internetka ugu faafay Vidowga hoose oo muujinaya wariye u dhalatay Holland oo isku dayaysa in ay Soomaalida wax ka waydiiso khaatka balse nafteeda qatar galisay.